7.1 Kulantiina iyo Salaan
Fadlan diyaarso inaad waqti la qaadato Maareeyaha Adeegyada Degenaanshaha markaad u soo guurto maadaama ay awood u yeelan doonaan inay kugu baranayaan tas-hiilaadka gurigaaga cusub iyo siyaasadaha iyo habraacyada lagu xusay buuggan. Waxay kaloo awoodi doonaan inay kugu socodsiiyaan barnaamijka barnaamijkeena maaraynta, kaas oo kugu xiri doona deeqaha iyo adeegyada aad heli karto markaad tahay degane 12 Sherwood Street.
7.2 Heshiiska Kirada
Kahor intaadan soo guurin waxaad saxeexi doontaa heshiiska kirada oo qeexaya shuruudaha kiraysigaaga. Waxaad heli doontaa nuqul heshiiska kireysiga ee la fuliyay oo uu saxeexay mulkiilaha taariikhda ama ka dib bilaabista kiraysigaaga. Aad ayey muhiim u tahay inaad si taxaddar leh u aqriso heshiiska maadama qodobbadiisa ay yihiin kuwo sharci ahaan dhaqan gelinaya lana dhaqan gelin karo. Fiiro gaar ah waa in la sameeyaa iyada oo laxiriira qodobbada tilmaamaya ikhtiyaaraadka dib-u-cusboonaysiinta (haddii lagu dabaqi karo) iyo ogeysiis xilliyo la joojinayo kiraysigaaga. Heshiiskaaga waa in loo aqriyaa iyadoo lala kaashanayo buuggan laakiin haddii ay dhacdo kala-goys kasta, shuruudaha heshiiska kiraysiga marwalba way hormarayaan.
Diiwaan-ururin ka sheekeynaysa alaabta guriga, qalabka ku rakiban guriga dhexdiisa iyo xaaladdooda maalinta aad soo degtay ayaa boostada e-mayl ahaan loo soo diri doonaa isla markaaba kiraysigaagu bilaabmo. Tan waxaa diyaariyay xafiis-hayaha agabyada madaxa-bannaan oo laga yaabo inaad la kulantay maalinta kireysigaagu bilaabmayo. Waa muhiim inaad si fiican u hubiso alaabada iyo haddii aad aamminsan tahay inay wax khaladaad ah ka jiraan warbixinta, ku faahfaahin kuwaan Maareeyaha Adeegga Deganeyaasha iyo Maareeyaha Hanti Savills 48 saacadood gudahood.
Haddii aadan dalban wax isbeddel ah oo ku saabsan alaabada (sida kore) waxaa loo qaadanayaa inaad aqbashay jadwalka shuruudaha inuu yahay bayaan dhab ah oo run ah. Kuwaas ayaa markaa loo isticmaali doonaa in lagu go'aamiyo wixii lacag-dhimis ah ee looga jaro dabaajigaaga dhammaadka kireysigaaga.
Fadlan ku hayso nuqullada alaabadaada meel aamin ah maadaama aad ugu baahatid dhamaadka kireysigaaga si aad u hubiso in walxaha oo dhami ay meel yaal, qol qol, sida ku xusan kaydka.
7.4 Bixinta Kirada
Kiradaada waa la bixin karaa horeyna heshiiskaaga kiradu wuxuu faahfaahin ka bixin doonaa inta jeer iyo habka lacag bixinta. Kireynta waxaa lagu bixin karaa amar amar haddii aan hab kale oo lacag bixin ah lagula heshiin milkiilaha hoyga inta kireysiga la bilaabayo. Waa in lagu siiyaa faahfaahinta bangiga ee bixinta kirada socota laakiin haddii aadan taa ahayn, Maareeyaha Adeegyada Degganeyaasha ayaa awoodi doona inuu ku siiyo.
Aad bey muhiim utahay inaad sameyso lacag bixin waqtigeeda ku haboon iyadoo la raacayo heshiiskaaga deganaanshaha, maaddaama inaad bixin weyday waxay horseedi doontaa inuu mulkiilahaagu qaado talaabo sharciga waafaqsan si loo joojiyo kiraysiga.
7.5 Adeeg si loo dejiyo
Markaad u soo guurto guriga waxaad u baahan doontaa inaad iska diiwaangeliso adeegyada soo socda
Ruqsadda TV-ga - fadlan la xiriir www.tvlicensing.co.uk ama taleefan u dir 0844 414 2331 (fadlan la soco in xitaa haddii aad kumbuyuutarkaaga ku soo rogto aad u baahan tahay laysanka TV-ga).
Canshuurta Golaha - Dhamaan deganayaashu waxay mas'uul ka yihiin bixinta (ama u soo bandhigaya golaha ka dhaafitaanka) Canshuurta Golaha ee lagu dabaqi karo guriga. Fadlan la xiriir Westminster Council si aad ugala hadasho tan: www.westminster.gov.uk ama 0345 608 5401.
Caymiska Tusmada - Mulkiilahaagu wuxuu caymis geliyaa dhismaha, falaatka iyo waxyaabaha ku jira guriga dhexdiisa. Si kastaba ha noqotee, adiga ayaa mas'uul ka ah inaad caymis ku sameysato waxyaabaha aad adigu leedahay sida ku xusan caymiska waxyaabaha ku jira oo dhameystiran oo aad dalban karto haddii ay dhacdo in hantidaadu dhaawacmaan inta aad deggan tahay guriga.